SIDA LOO DOORTO KALLUUMEYSI, QIIMO JABAN OO LAGU KALSOONAAN KARO - MISHIINADA GAARKA AH
Milkiilayaasha meella badani waxay inta badan fiiriyaan "mashiin yar yar." Farsamadani waxay kufiican tahay kiisaska marka kumbuyuutarka uu horayba u culus yahay, cagafkuna weli si wayn ayuu ugu jiraa goobta. Dabcan, waxaan doonayaa in qalabka noocan oo kale ah uu daboolo noocyo badan oo shaqo ah. Wax badan ayaan ka baran karnaa sida loo doorto kalluumeysiga ku haboon guri weyn oo dalka ah.
Suuqa waxay bixisaa tiro badan oo ah noocyo kala duwan. Mar kasta ma suurtogal ah in si deg deg ah loo doorto kala-soocida ku habboon noocaan kala duwan, sidaa darteed waxaan tixgelin doonaa noocyada ugu waaweyn ee qaababka noocan oo kale ah. Aynu bilowno ugu fudud.
Kuwani waa alaabta ugu awoodda badan ee qof walba uu qaban karo. Waxay leeyihiin naqshad aad u fudud oo fududeeya dayactirada. Waana cad cad oo ah midab yar oo u oggolaanaya in uu ka shaqeeyo meel kasta oo ka mid ah beerta (halkaas oo qalabka baabuurta si fudud u shaqeynin). Waxaa loo isticmaalaa buuraha Alpine, sariiraha ubaxa, meel u dhow xaydaanka.
Si loo beero suuqyo yar oo dhul ah, bannaanka ayaa si firfircoon u isticmaala majaajilada Krot iyo kalluunka gacanta lagu qaato.
Qalabka gacanta waxaa ka mid ah labo nooc:
Rotary (waxay yihiin xiddig). Xaqiiqdii, waa mashiinka iyo dukumintiyada ku dul yaal. Waad ku mahadsantihiin dhamaadkeeda iyo qaabkeed aan caadi ahayn, kalluumeeyuhu si fiican ayuu u socdaa dhulka, wuxuu kor u qaadaa oo u rogaa hoos. Badanaa waxaa ku jira mindi dallacan (haramaha ayaa sidoo kale la goostay waqti isku mid ah). Doorasho weyn oo loogu talagalay ciidda jilicsan iyo beeraha sariiraha sare - qajaarka, baradhada iyo dalagyada kale. La shaqeynta iyaga ayaa ku haboon sababtoo ah gacan qabashada dheer.
Rippers. Qalab loogu talagalay dhul culus, dhul-gooyo aan fududeyn oo fudud. Mabda'a waa mid fudud - isku mid ah, laakiin leh 3-5 ilko fiiqan. Markaad shaqeyneyso, waa inaad sameysid ballaar balaaran oo si xoog ah u hoos u dhig qalabkaan dhulka, ha ilaawin inaad jiidato jihadaada. Waxaa loo soo saaraa labadaba qaybta beerta (caanaha dheer, 5 ilig), iyo khafiifinta, taas oo ku habboon lagu koriyo - waxay leedahay saddex ilkood oo yaryar iyo "gaaban" gaaban.
Laakiin su'aasha ah nooca beeraha ayaa ka wanaagsan inuu iibsado dacha ballaadhan, inta badan wuxuu tagaa diyaarad kale. Dumarka suurtagalka ah ayaa aad u xiiseynaya shaybaaro isweydaarsan.
Dhammaan dhismayaasha la soo saaro ee noocan ah waxaa loo qaybin karaa fasallo iyadoo ku xiran miisaanka iyo awoodda.
Milkiilayaasha yaryar, laakiin "meelaha cidhiidhiga ah" caadi ahaan waxay u muuqdaan kuwo cidhiidhi ku ah baabuurta iftiinka ah. Waxay yihiin matooro 2.5-4.5 hp, miisaankuna wuxuu u dhexeeyaa 20-40 kg.
Wixii ururinta shaqada ee daaqada iyo daaqada ubaxa waxay u baahan tahay qalab gaar ah: geedka cawska, jilicsanaanta, barafka.
Caasimadda "qalab" oo loogu talagalay qalabkan waa dacha oo ku saabsan 10 acres oo leh ciidda iftiin iyo carrada si fiican. Sida ikhtiyaari ah, dhageysiga hufan ayaa badanaa la bixiyaa, gooyaa godadka dhulka.
Dhibaatooyinka ka dhasha, baahida loo qabo fasaxyada badanaa iyo qaabka firaaqada robots ayaa lagu xusay - "wax lagu tumayo" adigoon jilicsanayn, mootadu waxay lumisaa kheyraadkeeda.
Ma taqaanaa? Halyeeyga "Mole" wuxuu bilaabay inuu sii daayo in ka badan 30 sano ka hor. - Sanadkii 1983, nuquladii ugu horeysay ayaa ka tagay warshadda Moscow. Wax yar ka dib, wax soo saarka waxaa laga helay Omsk.
Laga soo bilaabo qoyska of cultivators sidoo kale waxay u taagan tahay koox ka mid ah qalabka ultra-yar. Iyadoo loo eegayo cabbirka ugu yar, waxay ku habboon yihiin gaadiidka, laakiin daciif ah (illaa 3 hp) mishiinnada si toos ah ayuu u yareeyaa qoto-dheeraynta daloolka. Wixii beerta la dayacay ma ayan taamayn doonin, laakiin waa in lagu koriyo si sax ah. Waxyaabaha ka mid ah fasalka dhexe ayaa horeba awood u leh: 4.5-6 "fardo" oo culeyskiisu yahay 40-60 kg. Waxay la tacaali doonaan ciidda dhoobada, laakiin waa suurtogal in la soo jiido ciidda bikradda ah sababta oo ah farsamoyaqaan fudud. Halkan (sida farsamooyinka iftiinka), kuwa jarjarayaashu waxay ciyaaraan door laba - way kala furfuraan oo waxay dhaqaajiyaan mashiinka hore. Ka hortagidda caqabada, waa inaad baabuurka dib u soo celisaa dhowr mitir.
Waxay fududeysaa hawsha taageerida. Qalabka qalabka ayaa sidoo kale waa mid cajiib ah - marka lagu daro dhageysiga caadiga ah, waxaa ku jiri kara wax beeran, harraad iyo joodar.
"Sare" ee noocyada kala duwan ee nooc kasta oo la mid ah waa wadar culus (illaa 9 hp). Faa'iidadooda, waxaad u soo gudbin kartaa doodahaas oo kale sida awood weyn iyo qulqulaya, suurtogalnimada isticmaalka booma iyo bamka waraabinta, iyo sidoo kale in lagu qaado alaabta. Qaababka qaar ka mid ah qeybtan ka dib markaad la xiriirto rikoodhada si ammaan ah u geyn kara 500-700 kg oo shixnad ah.
Waa muhiim! Waxyaabaha leh mashiinnada biriijka ah ee gudaha ayaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan dibadda. Qaadista kalluumeysiga noocan oo kale ah oo lagu karkariyo aqal aad u weyn, waxaad halis ugu jirtaa in la burburiyo dhirta leh qiiqa waxyeello leh.
Waxaa jira dhibaatooyin. Tani waa, ugu horreyntii, miisaan badan oo badan - laga bilaabo 60 kg (badankoodu xitaa "booday" boqolkiiba). Qaar waxay ku wareersan yihiin isticmaalka shidaal iyo kor u kaca. Run ahaantii, waxaa magdhow la siinayaa wax soo saarka iyo shaqada mudada dheer ee carrada.
Waxaa jira nooc kale oo kala duwan - oo leh nooca mishiinka iyo awoodda. Taasna waxay ku salaysan tahay, dhammaan noocyada la soo saaro ee noocan ah waxaa loo qaybin karaa kooxaha soo socda:
Dib loo dhigo. Wixii cidhifyada waa nadir. Bateriga waa in si buuxda loo soo dallacaa, oo wixii khasaare ah ee ku yimaadda "dib u soo celinta" waxay si weyn u yareyn kartaa khayraadka.
Koronto. Gawaarida wanaagsan, laakiin "qiyaasta" waxay ku kooban tahay dhererka xadhigga. Si loola shaqeeyo beerta u dhow guriga waa ku haboon yahay, halka furan yahay dareen yar oo ka timaada (haddii aysan jirin koronto-yaqaan xoogan).
Iyadoo leh mashiinno gudaha ah. Aragtida ugu weyn. Waxaa jira meel kasta - laga bilaabo degaan yar oo kuyaala beeraha. Cutubyadani waa inay fiiriyaan muuqaal dhow, maxaa yeelay inta badan waxay iibsadaan.
Waxa aad raadineysid markaad dooranayso beerid
Kalluumeysatada leh mashiinnada biriijka ee gudaha ayaa doorbidaya kuwa u baahan in si dhaqso ah loo shaqeeyo goobaha waaweyn. Laakiin ka hor intaanay iibsanin waxaa haboon in la xusuusto sifooyinka qalabkooda, sababtoo ah waa waqtiyo sidaas oo kale ah inaad u fiirsato markaad dooranayso matalaad.
"Wadnaha" ee cutubku wuxuu noqon karaa 2 ama 4-stroke. Mid kasta oo ka mid ah noocyadaasi waxay leeyihiin sifooyin gaar ah. Tusaale ahaan, mashiinnada laba-garaacis ah:
In badan oo la heli karo.
Ka xoog badan afar taatikadood oo isku mid ah.
Aaminsan tahay oo la ilaalin karo.
Qaali ma'aha inta lagu jiro dayactirka caadiga ah.
Ma taqaanaa? Waxaa sidoo kale jira "keyn" noocyo kala duwan, oo ku habboon xaaladaha ugu adag. - baaxada weyn ee jirridda iyo carrada dhagaxa. Waxaa la yaab leh in inta badan qeybahaasi ay soo saaraan dadaalka shirkad, Swedishka "Kalluumeyaha Bracke".
Waa jaangooyooyinka kuwaas oo inta badan soo iibsada kuwa xallinaya dhibaatada - sida loo doorto kalluumeysi gaas leh oo sahlan. Laakiin waxaa jira dhowr dabeecadood. Waxaa dhici karta in midka ugu muhiimsan yahay doorashada shidaalka iyo diyaarinta kartida leh ee isku darka. Waxaad u baahan tahay inaad gaas oo tayo sare leh ka iibsato ("A-95") oo ku dar saliida ku habboon si waafaqsan tilmaamaha. Qaarkood waxay dayacaan xeerkan fudud waxayna ku shubaan "sagaashan-labaad" oo lagu daro saliidda laga soo galo qashinka. Sidaa darteed, beeruhu wuxuu tagi karaa qashinka - dayactirku waa qaali.
Afar wareeg ah waa qaybo badan oo dhexdhexaad ah iyo kuwo culus. Waxay yihiin:
Hayso kheyraad aad uwanaagsan.
Sii macquul ah iyo waqti dheer.
Ha u baahnayn meelo dheer oo aad ku qaboojisid. Yar iyo dhowr daqiiqo.
Waxaa ka wanaagsan in la xoojiyo jaranjarada (waxay saameeysaa culeys badan).
Uma baahnid inaad si joogto ah u shubtid isku dar ah.
Waxa kale oo jira ikhtiyaaro naafonimo leh oo leh faa'iidooyin u gaar ah, sida xakamaynta wanaagsan ee wareega hoose. Sida qaboojinta, inta badan qeybaha la soo jeediyey waa caanaha "hawada hawada". Mihnaduhu waxay tilmaamayaan in aysan u baahnayn nidaam dareere ah, maadaama ay culeyska ka fog yihiin xadka.
Waa muhiim! Ha ku hayn caleenta jarjaraha hore - waa inaad gacanta ku qabsataa labada gacmood iyo dadaal weyn, ma ilaawin si aad u hagaajiso qoto dheer ee beerta. Noocyada iftiinka ah, marka loo eego, waxay ku ridi karaan dhulka adag, waana inay ku riixaan dusha sare.
Waxaan mar hore ka ogaanay ku tiirsanaanta tooska ah ee qoto-dheeraynta farsamaynta awoodda mashiinka. Laakiin waxay saamaynaysaa aagga "qabashada". Marka, laba hektar oo 5-7 hp ah ayaa ku filan. Meelaha waaweyn (4-5 hektar) waxay u baahan doonaan ugu yaraan 9-ta gawaarida ah. Beerta yar yar waxaad heli kartaa 3-4 "fardo".
Isku mid ahaan waa muhiim u gudbinta tareenka mashiinka mashiinnada ama farsamooyinka shaqada iyadoo loo marayo qalabka. Doorka khaaska ah waxaa loo xilsaaray oo keliya in la helo gawaarida - in badan oo ixtiraamo kalsoonida qaybta oo dhan iyo qaabka guud ee kuxiran waxay ku xiran tahay. Dhibaatooyin badan ayaa sababa dhibaatada, nooca hoos-u-dhacu waa ka fiican yahay, silsilad caan ah ama dixirig yar. Waxaan isku dayi doonaa inaan caddeeyo, ma iloobin fursadaha kale.
Noocyada isu gudbinta silsiladda:
Waxaa lagu dhejiyaa mashiinno leh mashiinno cufan.
Waxay leedahay kheyraad weyn.
Waxay noqon kartaa mid adag ama isku dhafan. Xaaladda labaad, way fududahay in la ilaaliyo cutubkan (dhaawaca waxaa lagu hagaajin karaa gacmahaaga).
Waxay qabataa dhibaatooyinka "qoyska" sida murgacasho iyo daldaloolo. Sprockets sidoo kale waa la dhaawici karaa, mararka qaarkoodna waxay gaaraan furaha dabka. Inkastoo dhammaan khaladaadkaas si fudud loo xalliyo.
Wixii mashiinka mishiinka ah ee ku habboon "dirxi", taas oo:
Waxay leedahay miisaan hoose oo yar iyo cabbir yar.
Waxaa loo isticmaalaa kaliya moodooyinka fudud.
Ma taqaanaa? Shirkadda Jarmalka "Bungartz" Sanadkii 1937-dii, waxay bilaabay inay soo saaro koronto awood leh oo ay la socoto 8 iyo 10 xoog. Sanadihii la soo dhaafay, calaamadahan, inkastoo "diiwaanka", waa in ay adkeeyaan naceybka Nazis - hoggaamiyayaasheeda ayaa diiday in ay buuxiyaan amarro millatari, iyagoo sii daayay alaab ammaan ah oo ammaan ah.
Sida aad arki karto, wuxuu leeyahay faa'iidooyin yar, taas oo aan la sheegi karin ku saabsan faa'iido darrada ah sida gearbox. Ma u dulqaadanayo culus culus - dharka, iyo xataa si ka badan sidaas, rikoodhadu mar dambe ma taagnaan karto. Qalabka naxaasta si dhakhso ah ayuu u xiran yahay, mashiinka wax soo saarku wuxuu inta badan keenaa dib u habeyn. Tilmaamaha "waxyaabaha la isku halleyn karo" ayaa loo tixgeliyaa "ujeedka" in ay kululaan iyo khasaaro weyn oo weyn. Waxaa intaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dabaqo xoog xoog badan - riixaya farsamaynta oo dhan, waxaad dareemi kartaa in giraangiruhu aanu soo jeedin xataa marka qulqulka la qabsado. "Taabasho" sidoo kale ma had iyo jeer bixiyaan natiijada.
Waxa suurtagal ah in ay ku taliyaan doorashadan kaliya oo ah kuwa wax ka qaban doona carrada iftiin leh.
Kuwa ugu awoodda badan leh waxay ku qalabaysan yihiin gooyo. Ma aha tusaale tusaale ah oo qaali ah, laakiin khayraadka ay leeyihiin waqti dheer. La shaqee inta badan culeyska. Asalka asaasiga ah, laakiin waa qalab gaaban oo loo yaqaan "hybrid" ka jaban. Tani waa nooc ka mid ah isdhexgalka u dhexeeya kalsoonida qalabka joogtada ah iyo fududaynta silsiladda. Si fudud, laakiin si ay u adeegaan sida xidhmo sida aan xirfad lahayn mararka qaarkood way adag tahay.
Mashruucan oo kale ma samayn karo isaga la'aantiis. Hababka soo socda ayaa loo adeegsadaa:
Qalabka Sannad-joojinta, oo la mid ah kan aan loo isticmaalin silsiladaha. Waxaa loo adeegsadaa unugyada khafiifka ah, si sahlan loo badalo xaaladaha garaashka;
Waa muhiim! Weydii waxyaalaha ku jira qaybaha korontada iyo nidaamyada. Qoryaha sare ee xoogga leh ayaa ku haboon ujeeddooyinkaas, halka dildilaaca naxaasiga ahi uusan soconayn dheer.
Suunka leh xargaha qalabka ayaa laga helaa moodooyinka qaybta dhexe.
Nidaamka leh qalabka furfurista ee "baabuurta". Tani waa mid ka mid ah nuqullada ugu awoodda badan. Gaadiidka waxaa ku yaala mid weyn, iyo daboolka suunka leh ee suumanka aan la qabsan karin. Khasaaruhu waa kakanaanta dayactirka iyo kormeerka.
Qodashada ballaaran iyo qoto dheer
Waxay ku jirtaa xuduudahan oo kale in milkiilayaasha mustaqbalka ay isla markiiba fiiriyaan. Tirooyinkani way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran heerka fasalka beeraha:
Waxyaabaha yaryar ayaa "qabsan doona" ugu badnaan nus mitir leh qoto dheer oo qoto dheer oo ah 15-18 cm Moodooyinka Micro waxaa lagu masaxayaa wax ka badan 30 cm, xabadka ilaa 7-8 cm.
Qalabka qaybta dhexe waxaa lagu hagaajin karaa qiyaas ahaan 40-80 cm (qaarna waxaa la kordhiyay ilaa 85). Hilling wuxuu ku dhacaa qoto dheer oo ah 23-28 cm.
Qaybo culus waxaa loogu talagalay in lagu galo 0.9-1 m iyo qoto dheer oo ah ugu yaraan 30 cm.
Inaad maskaxda ku hayso ballaadhka ugu haboon, ha iloobin mashiinka laftiisa. Si looga fogaado xad-dhaaf, awoodeeda waxaa loo xushay sidan soo socota:
1 hp / 20 cm xajin afarta daroogo.
1 hp / 30 cm 2-garaacid.
Xisaabiyooyinkan sahlan ayaa kaa caawin doona inaad ka fogaato dayactir qaali ah.
Jiritaanka dib u celin
Joogitaankiisu wuxuu noqon doonaa oo kaliya plus. Suurtagalnimada in dib loo celiyo waa "mudnaanta" ee beeraha ballaaran, inkasta oo mashiinnada qaybta dhexe ee yar yar ay leeyihiin doorashadan.
Ma taqaanaa? USSR, gawaarida yaryar ayaa bilaabay inay muuqdaan habeenkii 1980-kii - ka hor ciyaaraha Olambikada, waxaa la iibsaday mashiino mashiino Czech ah oo loo yaqaan 'TZ-4K'. Waxay ahaayeen kuwo aad u guulaystay in meel walba loo isticmaalo: laga bilaabo nadiifinta waddooyinka si ay uga shaqeeyaan beeraha.
Gearbox waxaa inta badan loogu talagalay seddexda habab: xoqin xawaare hoose (100-150 daqiiqo), dheecaan xawaare sare oo dusha sare ah iyo burburinta weelka (250-300 rpm) iyo, dhab ahaan, dib u noqosho.
Moodooyinka iftiinka ah, gacmaha la qaadi karo waa la arki karaa - uma baahnayaan xabbad dheeraad ah oo isku gudbinta, dhaqdhaqaaqana waxaa loo samayn karaa gacanta.
Dhamaadka tuubooyinka curyaamyada ah ayaa koontaroolaya qaabka gacanta. Waxay mas'uul ka yihiin inay ku foorarsadaan xakamaynta, xawaaraha wadista iyo is-beddelashada. Waxaa jira shuruudo yar oo iyaga loogu talagalay. Waa inay noqdaan kuwo raaxo leh (doorbidayaa in la jajabiyo) iyo xaalad wanaagsan. "Isku dhafid" iyo kuwa xirxiran oo la furfuro.
Ka hor intaadan gadan, fiiri sida fiican ee fiilooyinka ku yaala gacanta. Si dhakhso ah u soo galaan wasakh ayaa adkeyn kara shaqada.
Qodobbada muhiimka ah ee saxda ah ee xakamaynta iyada oo aan si xor ah u socon. Tusaale ahaan, fiilo "fiilo" ah ayaa la ogaan karaa oo kaliya marka ay gacantu noqoto mid ciriiri ah - haddii ay weli tahay mid la isku laabo oo cutubkuna horay u sii socdo, waa inaad xallisaa dhibaatadan (oo la mid ah mootada).
Marka lagu daro cutubka caadiga ah, qaybta ikhtiyaari ee "canopies" waxaa ku jiri kara aaladahaas:
Goobaha loo yaqaan 'propashny mammers' ee goobaha culus.
Wheels or wheels (loogu talagalay moodooyinka loo yaqaan 'wheels model'), taas oo fududeynaysa dhaqdhaqaaqa oo ha u oggolaan in "jebin" dhulka.
Waa muhiim! Si aad u gashato xannibaadda, qaas ah oo gaar ah, oo loo yaqaan "cutters narrow" ayaa loo baahan yahay.
V-shaped shawshare (hiller), taas oo u dhejin godadka beeritaanka iyo xakamayn dhulka ku dhow dhirta.
Qodobo kala duwan oo isku dhejis ah (hal ama laba dhinac ah).
Digriiga baradhada. Xirmooyinka isku midka ah, laakin waxay leedahay waxyaabo gaar ah. Jarista digriiga, iyaga ayaa jiidaya. Waxaa la bixiyaa kaliya moodooyinka xoogan.
Cutters iyo foorarsiga nadiifinta caleemaha hore iyo barafka.
Gaajada iyo miisaanka gawaarida.
Trolley ama rikoodh yar.
Liisku waa mid cajiib ah, wuxuuna keenaa isbarbardhig aan raali aheyn oo leh gawaarida socodka. Tani qayb ahaan waa run, laakiin kalluumeysigu wuxuu leeyahay fikradiisa "fikradda", oo ka duwan shaqada hawsha baabuurta. Dambaalku wuxuu aad ugu dhow yahay astaamaha muraayadda yaryar, mashiinka awoodda badanna wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaadato wax kasta oo "haraaga". Milkiilaha beeraha waa inuu si taxadar leh u doortaa qalabka si uusan u badin motorka.
Baro astaamaha farsamada ee Neva MB 2, Salyut 100 iyo motoblocks Zubr JR-Q12E.
Talooyinka soo kordhay
Marka laga reebo liiska caadiga ah ee qalabka, iibsadaha ayaa laga yaabaa inay bixiyaan qalab kale oo "khaas ah". Kuwaas waxaa ka mid ah:
Aerator A mugdi ah dhif ah, gogol dhulka si loo helo helitaanka hawada xididada.
Si sahal ah u shaqeynaya qaybaha dhulka sida cawska.
Maqasyo leh qaab maqaal ah.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha macmiilka yar-yar ee wakhtigaygii hore ee xooga ah ayaa la qiimeeyay, oo gobollo badani way yaraadeen. Si loo xisaabiyo baahida loo qabo, hay'adaha sare sida Guddiga Qorsheynta Gobolka iyo Guddiga Dhismaha Gobolka ayaa soo saaray wareegto faahfaahsan, oo la yaab leh qaababka casriga ah.
Meelo "Corner" ah oo ka shaqeeya geesaha cawska.
Ka hor intaadan isticmaalin, waxaa lagugula talinayaa in aad barato ku saabsan iswaafajinta suunka gaar ah ee cutubkaaga.
Si aan loo daboolin "bidixda bidix", fiiro gaar ah u saar alaabooyinka ka soo jeeda kalluumeysatada. Waxyaabaha ka mid ah noocyada soo socdaa waa kuwa ugu caansan:
"Mole". Naqshaduhu waxay yaqaanaan waqtiyada Soofiyeeti. Nooc yar oo fudud, oo si fudud loo maareyn karo, awood u leh inuu dabacsanaado 20-25 cm oo aan lahayn dhibaatooyin gaar ah. Cabbir yar ayaa kuu ogolaanaya inaad u qaaddo qalabka xitaa gaariga gaariga.
"Neva" taliyaha MK-100 oo la qabsanaya dabacsan, jaridda dhirta iyo bacriminta. Unugyada korontada laga keeno waxay leeyihiin khayraad weyn. Shabakada adeegga si fiican ayaa loo horumariyaa, markaa wax dhibaato ah kuma lahan qaybaha loo yaqaan 'spare parts'.
Tarjun Qeybta yar-yar ayaa lagu qalabeeyaa 6-taakuleyaal American Briggs & Stratton, taas oo ka dhigaysa mid ku haboon in lagu shaqeeyo dhoobo culus. Xusuusnoow sidoo kale cunto dhexdhexaad ah "shidaal".
"Viking". Qalabka guud ee qalabka ah ee ka yimaada Austria waxaa lagu kala saaraa qaab wanaagsan oo ah qaybo iyo qalab leh xoog korodh. Jidhku wuxuu ka samaysan yahay laba lakabyo polymer ah, "dixirig" wuxuu ka samaysan yahay birta adkeysiga leh. Xakamaynta gudbinta gudbinta waxaa lagu qalabeeyaa quful, kaas oo baabi'inaysa qaliinka isku mar ee laba nooc. Analogga gudaha ee nooca 585 waxaa lagu magacaabaa "Tarpan".
Waa muhiim! Wakhti ahaanba hubi joogitaanka saliidda galka gorgortan.
Daanish "Texas " awood u leh in ay qaataan nooc kasta oo qalab iyo koobi leh dhammaan noocyada beerashada on carrada kala duwan. Wuxuu u baahan yahay daryeel qibrad leh - noodhka qaar ayaa adkaan karta in la helo.
Inaad ogaato sifooyinkaas qalabka iyo shaqada, waxaad si sahlan u heli kartaa kalluumeysiga lagama maarmaanka ah. Ka dibna shaqadu waxay noqon doontaa farxad, qalabkuna wuxuu socon doonaa muddo dheer. Goosashada wanaagsan